Layaab: Warkii hore war soo dhaaf: Daawo Robots Guri ku dhisayo kaliya labo maalmood. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Arimaha Bulshada » Layaab: Warkii hore war soo dhaaf: Daawo Robots Guri ku dhisayo kaliya labo maalmood.
Layaab: Warkii hore war soo dhaaf: Daawo Robots Guri ku dhisayo kaliya labo maalmood.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 11-08-16 10:32 AM Robot cusub Oo ku dhiso karo guriga oo dhan laba maalmood Gudaheeda Asiga oo aan marnaba u baahneyn Nasasho Hadrian X Waa Robot aad ee ugula yabeyn Dadka Ku Shaqeysta Dhismaha Guriyada Robot ayaa leh Gacan 30 Mitir ah taasi oo ku qab qabsanaayo Waxyaabaha oo u bahdo .
Hadrian X waxaa lagu buuxinayaa Dhagaxyo Waxaana oo dhagax yadaas ku dhisayaa Guriga asiga oo ku so qadanaayo Gacantiisa sido kale waxa oo ka tagayaa ama oo calameysanayaa Meelaha ee marayaan Filooyinka Korontada .
Waa aqli hadii oo fahamsan yahay melaha ee marayaan Filooyinka loo adeegsado Karontada Robotkaan waxaaa sameyay Mark Pivac kaas oo ka soo jeedo Australia Mar oo saaxaafada u waramayay waxa oo yiri “Waxaanu nahnay Dad fahamsan Technolejiyada waana mid dhowr nuuc ah hadii aad tahay farsamo yaqaan waxaa kugu Haboon in aad ogaato wax kasta aad sameyneyso .
Robotkaan waxa lagu howlanaa 10 Sano waxaana qiimahiisa ku kaceysaa £ 4.5 Sanadihii dambe waxaa soo badanayay Robot yada waxaana la filayaa in Gor dhaw suuqayada lagu arko Robot sida dadka Camal u Shaqeysanaayo